Ndiani Akauraya JonBenet Ane makore 6?
Musi waDec. 26, 1996, mutumbi waJonBenet Ramsey wemakore matanhatu akawanikwa muchitsime cheBoulder, Colorado kumba mushure mekunge chikwata chekudzikinura chawanikwa chichitsvaka mari kuti adzoke. Nhengo dzemhuri dzaishungurudzika pakuongorora, kunyange zvazvo DNA yekune imwe nyika yakawanikwa pamapfekete emusikana. Hapana munhu akambotongerwa mhosva yepamhosva mune mhosva, iyo inoramba isingawaniki.
Heino zviitiko zvitsva zvekuongorora kweJonBenet Ramsey:
Feb. 25, 2015 - Aimbova Boulder, mukuru wemapurisa eColorado vanoti vatungamiriri vake vanofanira kunge vakaita basa rakanaka rekuchengetedza nzvimbo yemhosva pamusha umo JonBenet Ramsey akawanikwa akaurawa. Mark Beckner akati kusava nesimba kwevashandi pamusana pezororo reKrisimasi chaive chikamu chechikonzero chekuvhiringidzika pachiitiko chacho.
Mumubvunzo weIndaneti uye purogiramu yekupindura, Beckner akati vatsigiri vanofanira kunge vakaparadzana nevabereki, John naPatsy Ramsey, uye vakatora zvirevo zvakakwana kubva kune mumwe nomumwe wavo pazuva rimwe.
Pane kudaro, apo vaviri vacho "vakateerera" vakasunungurwa uye vakabvumirwa kuenda kumba uye havana kubvunzurudzwa zvakare kusvikira mwedzi mishanu gare gare. Beckner akadana chisarudzo icho "chikanganiso chikuru."
Munguva yekutengesa paIndaneti, Beckner akazvidzawo hofisi yebazi reBoulder re "avo vanobatanidzwa zvikuru" mukutsvaga.
Bhakkner akati anotenda kuti DNA inowanikwa pamapfekete ane makore matanhatu ndiyo inokosha yekuwana munhu ane mhosva mumhosva yacho, asi akatiwo haafungi kuti ani zvake achazombopomerwa mhosva yekuponda muna 1996, pamusana pekukanganisa kwake dhipatimendi rakaita zuva iroro rokutanga.
Vakuru veJurusi Vaiti JonBenet Vabereki, Asi DA Balked muna 1999
Dare guru rekupomerwa nezvekufa kwaJonBenet Ramsey rakapa mhosva vabereki vake vose muna 1999, asi avo vechipato vakaramba kusaina gwaro rezvinyorwa zvaro ndokupomera nyaya yacho. Chiremba weChirongwa Alex Hunter haana kutenda kuti aiva nehumwe huchapupu hwakakwana hwokupa mhosva John naJohn Patsy Ramsey kuti vashandise vana vaduku, zvichienderana nekufa, maererano nemushumo wekutsvaga wepepanhau reBoulder.
Mapurisa Plan Hurukuro muJonBenet Case
Gumiguru 4, 2010
Vatsvakurudzo vakaronga hutsva huwandu hwekubvunzurudzwa munyaya isina kutongerwa JonBenet Ramsey, asi zvingasava huchapupu hutsva hwakakonzera basa. Dare rezano, rakagadzirwa nevatsvakurudzi vanobva kune dzimwe nyika nhengo dzehurumende, vakurudzira rutsva rutsva rwevvunzurudzo mushure mokuungana muna 2009.
JonBenet Ramsey Case Kudzokera kuBoulder Police
Vati ivo vachashandisa teknolojia itsva, unyanzvi, uye mazano ehurumende kuedza kugadzirisa mhosva yacho, Dhipatimendi reMapurisa eBoulder yatorazve mutsara mukuongorora kwekuuraya kwaJonBenet Ramsey. Kwemakore matanhatu adarika, kupfupiswa kwave kushandiswa nehofisi yemugovera wechenney.
Ramseys Kucheneswa muJonBenet Murder Case
Iyo Boulder, Colorado nharaunda yemagweta yakabudisa tsamba ichinyatsorambidza nhengo dzemhuri ye Ramsey yekupindira kupi zvayo munaDecember 1996 rufu rwemakore matanhatu JonBenet Ramsey mushure mekunge ichangobva kuwanikwa DNA uchapupu hunoti kune murume anoita utsotsi asingabatanidzi nemhuri kana mutemo kutevedza. Icho chipupuriro cheDNA, chinowanikwa pane chimwe chidimbu chezvipfeko zveJonBenet, zvinofananidza uchapupu hwakapfuura hwakawanikwa pamakumbo ake muna 1997.
John Mark Karr Akabatwa Mumhirizhonga Dzomumusha
Murume akawana ruzivo rwenyika kuburikidza nokureurura kuurayiwa kwaJonBenet Ramsey akasungwa uye akaiswa mujeri mushure mekukakavadzana kwemhuri kumba kwababa vake muSandy Springs, Georgia, pedyo neAtlanta.
Mapurisa akati vakasunga Karr mushure mokunge vatambira mumiririri 9-1-1 kupikisana pakati peKarr, musikana wake, nababa vake.
John Mark Karr Zvino Akasununguka Kuenda
Gumiguru 5, 2006
John Mark Karr, uyo akatsiva mudzidzisi wechikoro chesekondari uyo akareurura zvenhema kumhondi yaJonBenet Ramsey kuti abve muThailand, iye zvino ari munhu akasununguka mushure mokunge vana vachiona zvinonyadzisira mhosva dzakadzingwa pamusoro pake muCalifornia mushure mekunge vatsigiri vezvematongerwo enyika vakabvuma kuti vakanga vasina humwe hunopupu hwokuti vaende kutongwa. Sonoma County Superior Court Mutongi Rene Chouteau akaraira Karr akabudiswa pakarepo.
Karr Anochinja Kuona Zvinonyadzisira Kurudzira Kuita
John Mark Karr, uyo akapa chireve chenhema mumhosva yeJonBenet Ramsey, akaramba mvumo yekubvunzurudzwa kubva kuColumbia vatambudzi vangave vakamubvumira kuti aende kunze kwejeri uye anoshumira mutongo wekuongororwa pamhosva yehupombwe hwevana.
Gweta rake akati Karr anoramba asina mhosva uye anoramba kupomera mhosva yekutadza kwaasina kuita.
Mhosva Inodonhedzwa muJonBenet Ramsey Case
VaColorado vashanduri vakasarudza kusaregesa John Mark Karr nekuponda kweJonBenet Ramsey ane makore matanhatu, musi waDecember 26, 1996, mushure mokunge DNA ichiedza kusanganisa kuisa mhosva kune mhosva yehupupuriro uchapupu. "Chibvumirano pamusoro paVaKarr chave chichideredzwa negweta renharaunda," mutsigiri wevanhu vose Seth Temin akati. "Havasi kupfuurira nemhosva."
Kusungwa kwaJonBenet Mutsva Kunomutsa Mibvunzo Yakawanda
Kusungwa kwaJohn Mark Karr ane makore 41 muBangkok, Thailand nokuda kwekuponda kwaJonBenet Ramsey muna 1996 uye mazwi ake kuvatsvakurudzi akakuvadza kunetseka pamusoro pehutano hwekureurura kwake. Musangano wenhau neBoulder, Colorado District Attorney Mary Lacy nhasi haana kujekesa ruzivo rwekutsvakurudza, sezvaakaramba kupa mhinduro pane uchapupu munyaya yacho.
Mudzidzisi Akabatwa muJonBenet Ramsey Case
Mumwe murume ari kuitirwa muThailand pamusoro pemhosva yepabonde isingabatanidzi akabatwa pamusoro pekuponda kweJonBenet Ramsey ane makore matanhatu kuBoulder, Colorado uko anenge makore gumi adarika. Munhu anokanganisa, uyo ane hurumende anoti anoreurura kuurawa, achadzorerwa kuUnited States muvhiki inotevera.
JonBenet Ramsey Investigator Changes zvakare
Mutungamiri anotungamira mhosva yekuuraya mhosva yaJonBenet Ramsey iri kuda kuchinja zvakare, asi muchengeti mutsva ndiye akamboshanda paKisimusi 1996 rufu rwemwanasikana wemakore matanhatu aJohn naPatsy Ramsey.
Tom Bennett, muchengeti wechipatara kubva muDhipatimendi rePurisa reAvvada, akabatana nehofisi yemuchuchisi weBoulder muna 2003 achishanda chete pamhosva ye Ramsey, achishanda maawa 20 kusvika ku30 pavhiki.
Muurayi waJonBenet Akabatanidzwa Kune Rimwe Rakabatwa?
Vatsvakurudzi mumhosva yekuuraya muJonBenet Ramsey vanotenda kuti mushandi akauraya uyo ane makore matanhatu angangodaro akauraya zvakare mwedzi mipfumbamwe gare gare, kurwisa zvepabonde musikana ane makore masere, uyo akanga ari mukirasi yakafanana neJonBenet, muBoulder, Colorado chivako. A CBS "Maawa 48 Mystery" mushumo unoti zvakare DNA uchapupu mumhosva yeJonBenet inotaura kune murume asina kubatana nemhuri ya Ramsey. Kwemazana emakore masere kubva pakuponda, kupfupisa kwakanyatsotarisa kune nhengo dzemhuri ye Ramsey.
Mhosva DzeFlorida Rufu Row Masungwa Tiffany Cole
Phil Spector uye Kuurawa kweLana Clarkson
Nhoroondo ye Ex-Manson Mhuri Family Linda Kasabian
Nhoroondo yeRufu Row Masungwa Brenda Andrew
Rimwe Percenters Motokari Gang
Mhosva dzeMaria del Rosio Alfaro
The Case Mississippi Burning Case
Fireworks Periodic Table Yezvinhu
LDS Basa Nebasa mazano
7 Yakawanda Inofadza Hip-Hop Wedding Wedding
Madzimambo eChina Yenyika Yenyika
Marudzi eMapupa: Topographic, Political, Climate, and More
Imba Yako Ichapera Here? Tsvakurudzo Itsva Sheds Chiedza
Feminist Utopia / Dystopia
Shandisa Colored Chalk Kuti Usiye No Trace
Saturn muImba Yechipiri
Kuchinja Kilograms kuGrams
Kushanyira Vulcan's Star
Chii chinonzi 'GHIN,' uye Golfers Vanoshandisa Sei?
Biology Prefixes uye Suffixes: meso-
Italiyana Inopesana Nemafomu
Dhidziso Tsanangudzo muKemistry
Painting Zuva: 31 Mazano
Vatungamiri Vatungamiri Vakatsinhanisa Mabhendi Avo Uye Vakaramba Zita RomuBhuku
Neon Mwenje Inoshanda Sei
Saturn muPisces - Saturn Signs
Eight Great Gift Zvipo kune Shamwari Dzako dzeFrench
Half Crimp Grip: Essential Climbing Handhold
I 13 Mafomu Emagunha Antennae
Mamwe Mitsara Inenge Nguva Dzose Yakateverwa neChinjunction Mood
Tsvaga Wako America World War I Ancestors